Madaafiic Lagu Garaacay Saldhiga Ciidamada Puntland. – Bogga Calamada.com
Madaafiic Lagu Garaacay Saldhiga Ciidamada Puntland.
January 31, 2017 4:31 pm Views: 11
Wararka ka imaanaya degmada Boosaaso ee xarunta gobalka Bari ayaa sheegaya in tiro madaafiic ah lagu garaacay saldhig weyn oo maleeshiyaatka maamulka Ashahaado la dirirka Puntland ka sameysteen mid ka mid ah deegaanada hoostaga magaalada Boosaaso.
Madaafiicda ayaa lagu garaacay deegaanka Af-urur oo ka mid ah deegaanada hoostaga degmada Boosaaso halkaasi oo saldhig weyn ay ku leeyihiin maleeeshiyaatka maamulka Puntland.
Idaacada Islaamiga ah ee Andalus ayaa baahisay in guutada madaafiicda Xarakada Mujaahidiinta Alshabaab gaar ahaan qeybta buuraha Goolis ay Toban iyo Saddex (13)Â madfac ku dhufteen saldhiga maleeshiyaatka Puntland ee deegaanka Af-urur.
Wararkii ugu dambeeyay ayaa xaqiijinaya in madaafiicdaasi khasaara nafeet iyo mid hantiyadeed lagu gaarsiiyay maleeshiyaatka maamulka Puntland oo ka mid ah maamulada dowlada Itoobiya ka dhisatay dalka Somaliya.